Ikhaya elinomtsalane elijonge uMlambo iShell Rock.
Eli likhaya elipholileyo kodwa lihlaziywe ngokupheleleyo linembono ezithe ngqo zomlambo omhle weShell Rock. Ikhaya lineebhloko ezi-2 ukusuka kwipaki yedolophu, ibhloko ye-1/2 ukusuka kwikhaya lokungcwaba kunye neebhloko ezi-3 ukusuka kwindawo ephakathi kwedolophu. Eli khaya libonelela ngazo zonke izinto eziluncedo zekhaya.
Eli gumbi lokulala li-2, ikhaya lokuhlambela eli-1 lakhiwa ngokutsha. Ibonisa isicwangciso somgangatho ovulekileyo kunye nedesika esanda kwakhiwa ejonge uMlambo iShell Rock. Ibonelela ngazo zonke izibonelelo zekhaya. Ikhaya liziibhloko ezimbalwa ukusuka ePerrin Park kunye nedolophu esezantsi. Indawo yokuqubha edolophini ikumgama nje wemizuzu embalwa njengebala legalufa elihle iRound Grove. Eli khaya lifanelekile ukuba ufumane indlela yempelaveki emfutshane okanye ukuhlala ixesha elide. Iintsapho kunye nabahambi bezoshishino bahlala bamkelekile. Inezixhobo zala maxesha zentsimbi, ii-TV ezihlakaniphile kunye ne-eneji eyonga yonke into.
Ikhaya lizibhloko ezimbalwa ukusuka ezantsi kwedolophu kunye nepaki yedolophu. Kukuhamba umgama ukuya echibini lesixeko kunye ne-1/2 block ukusuka kwikhaya lomngcwabo.
Sifumaneka ngorhatya oluninzi kwaye siqhele ukubakho ngexesha lempelaveki. Ukuba kukho nantoni na oyifunayo / oyifunayo, sihlala ngasemva nangaphesheya kwendlela ukusuka kweli khaya.